हरेक छोरीले आफ्नो योनीमा मृत्यु बोकेर हिडेकी हुन्छे ! – Annapurna Post News
April 24, 2022 sujaLeaveaComment on हरेक छोरीले आफ्नो योनीमा मृत्यु बोकेर हिडेकी हुन्छे !
“विर्य वजारमा किन्न पाइन्छ,पुरुषको काम छैन” । अभियान्त सावित्री सुवेदीले एक युट्युव च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिंदै यस्तो विचार ब्यक्त गरेकी छिन् ।
जय नारीको नारा लिएर सामाजिक सन्जालमा चर्चित सुवेदीले पूर्वेली न्यूज च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यस्तो भनेकि हुन् ।
जय नारीको नारा बोकेर नारीको न्यायका लागि लड्दै आएकी मानवअधिकारकर्मी सावित्री सुवेदीले आफू ३५ वर्षमा विवाह नगरी आमा बन्ने बताएकी थिईन । बलात्कारविरूद्ध पेटिकोट प्रदर्शन गरेर चर्चाको शिखरमा पुगेकी सुवेदीले पुरूषको शुक्रकिट भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने बताउदै आएकी हुन् ।
उनले आफू निरन्तर समाज सेवामा लागिरहने र नारीको न्यायकालागि लडिरहने बताएकी छिन । ३५ वर्षमा एक्लै अथवा विवाहनै नगरी बच्चा जन्माए पछि आफु त्यहि बच्चाको लागि समर्पीत हुने पनि उनले बताएकी छिन । पछिल्लो समय बलात्कार र याैनहिंसा पीडित महिलाको न्यायाका लागि ज्यानै दिन तयार रहेकी सुवेदीको यो घोषणाले नयाँ तरंक ल्याएको छ ।